मुम्बई इण्डियन्सका फ्यानलाई नराम्रो खबर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुम्बई इण्डियन्सका फ्यानलाई नराम्रो खबर
एजेन्सी। आईपीएलमा बुधबार मुम्बई इण्डियन्स र किंग्स इलेभव पंजाबबीच खेल हुँदैछ। मुम्बईकालागि यो खेल ‘गरो वा मरो’ को अवस्थामा छ। यदि मुम्बईले यो खेल हार्यो भने प्लेअफबाट बाहिरिने निश्चित छ।
रोहित शर्माको नेतृत्वमा मुम्बईको टीम पंजाबलाई पराजित गर्न सबै कुरा आफ्नो चीज दाउमा राख्नकालागि तयार हुनेछ। इतिहास हेर्ने हो भने मुम्बईकालागि यो खेल जित्न त्यति सजिलो भने छैन।
वानखेडे स्टेडियममा किंग्स इलेभव पंजाब र मुम्बई इण्डिनबीच अहिलेसम्म सात खेल खेलेका छन्। जसमध्ये मुम्बईले तीन र पंजाबले चार खेलमा जीत हासिल गरेका छन्। अन्तिम पटक मुम्बईले तीन मे २०१४ मा पंजाबलाई वानखेडे स्टेडियममा पराजित गरेको थियो।
पंजाबले १२ खेलमा ६ खेल जितेर १२ अंक ल्याएको छ र मुम्बई विरुद्धको खेल जीतको अवस्थामा उ प्लेअफमा जाने संभावना हुन्छ। जबकि मुम्बईले जीत्यो भने पनि प्लेअफमा जाने संभावना कायमै रहन्छ। किनभने उसको १२ खेलमध्ये ५ खेलमा जीत हासिल गर्दै दश अंक छ। रोहित शर्मा एण्ड कम्पनी अंकतालिकामा छैटौं नम्बरमा छ।